Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 504082 times)
« Reply #900 on: February 03, 2013, 10:00:18 AM »
အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ FM အသံလွှင့်ဌာနကို ဖုန်းဆက်နေတယ်။
" ကျနော် ကန့်ကော်လမ်းသစ်တစ်နေရာကနေ ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးကောက်ရထားတယ် ။ အဲ့ထဲမှာ ငွေ ရှစ်သောင်းနဲ့ မှတ်ပုံတင် ၊ လိုင်စင်တွေလည်းပါတယ်ဗျ။ "
" ကြည့်စမ်း ...အဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကို ရေဒီယိုကနေတစ်ဆင့် ကြော်ငြာပြီး
ပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့.... ခင်ဗျား တော်တော် ရိုးသားတဲ့သူပဲဗျ ... "
" အာ... ဘယ်ကလာ ... ကျွန်တော် အခု သူ့အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် တောင်းဆိုမလို့ဗျ ... "
« Reply #901 on: February 03, 2013, 10:01:08 AM »
"အိမ်မှာ ကြွက်တွေ တအားသောင်းကျန်းတယ်ကွာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ တောင် မသိဘူး "
"ကြောင်ကလည်း အသုံးမကျပါဘူး မခုတ်ဘူးကွ "
" ဒါဆို ကြွက်ဖြူ မွေးထားလိုက် ကြွက်ဖြူရှိရင် ကြွက်မဲမနေဘူး "
"ဟေ့ သူငယ်ချင်း ဘယ်လိုလဲကြွက်တွေ ငြိမ်သွားပလား "
"အေးကွာ ~ ငြိမ်မငြိမ်တော့ မသိဘူးကွာ အဖြူနဲ့အနက်ကျား ကြွက်မျိုးဆက်အသစ်တွေတော့ အိမ်ပေါ်ရောက်လာတယ် ကွ "
« Reply #902 on: February 03, 2013, 10:02:28 AM »
ဆရာမ။သမီးတို့ ဒီကျောင်းမှာ ညစ်ညမ်းတာ မပြောရဘူးနော် ဥပမာ သမီးတို့ ( ,,,) ကို မျောက် ဆိုပီး ပဲ ပြောရမယ်...
မေရီ။ ကမ ရေ နင်သိလား ငါ့မျောက်လေး ဆံပင်ပေါက်နေပီအေ့
ဂျင်နီ။ ဒါများ ငါ့မျောက်ဆို ငှက်ပျောသီး တောင် စားနေပီ
« Reply #903 on: February 03, 2013, 10:03:18 AM »
အစောကြီးအိပ်ပြီး...အစောကြီးထတတ် တယ့် ယောက်ျားကောင်းကို..ဘယ်လိုခေါ်သ.လဲ
« Reply #904 on: February 03, 2013, 10:04:06 AM »
တစ်ရက် မောင်ဘက လဘက်ရည်ဆိုင်ကို ရောက်လာတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အကြီးအကျယ် ဖတ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တွေ့တော့ စိတ်ဝင်တစား မေးတယ် ။
''ဖြောင့်ဖြောင့်ပဲတွေး ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေ ၊ မသိဘူးလား ။''
''ရှင်းပြရတော့မှာပေါ့။ ဥပမာကွာ မင်းအိမ်မှာ ငါးမွေးထားလား''
''အဲဒီတော့ လူတွေလဲ မင်းချစ်မှာပေါ့ ''
''အဲဒီတော့ မိန်းကလေးတွေကိုလဲ စိတ်ဝင်စားမှာပေါ့''
''အဲဒီတော့ မင်းက အခြောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့''
''မှန်လိုက်လေ။ ဒီစာအုပ် ကျုပ်ကို ခဏငှားဗျာ '' လို့ပြောပီး ဖတ်ပါလေကော ။
နောက်နေ့ရောက်တော့ မောင်ဘ စာဖတ်နေတဲ့ အချိန် မောင်လှရောက်လာပြီး
''ဘာစာအုပ်ဖတ်နေတာလဲ မောင်ဘ ရ ''
''ဖြောင့်ဖြောင့်ပဲတွေး ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေ ၊ မသိဘူးလား''
''ရှင်းပြရတော့မှာပေါ့ ။ ဥပမာကွာ မင်းအိမ်မှာ ငါးမွေးထားလား။ ''
''ဟာ အဲဒါဆို မင်းက အခြောက်ကြီးပေါ့''
« Reply #905 on: February 03, 2013, 10:04:37 AM »
တစ်နေ့ vampire သုံးကောင် လမ်းခုလပ်မှာ တွေ့ကြသတဲ့ ။
အဲဒါနဲ့ ဘယ်သူက သွေး အများဆုံးစုပ်လဲ ပြိုင်ကြမယ်ပေါ့
ပထမတစ်ကောင်က ရုတ်တရက် ပြေးသွားလိုက်တယ် ။ ၁၅ မိနစ်လောက်နေတော့ ပြန်ရောက်လာတယ် ။ ပါးစပ်ထဲမှာသွေးအပြည့်နဲ့ ကျန်တဲ့ကောင်တွေက မေးကြတော့ ''ဟိုးကပွဲဈေးကိုတွေ့လား ၊ အဲဒီကလူတွေကိုသွေးစုပ်လာတာ''
အဲဒါနဲ့ ဒုတိယ တစ်ယောက်က လဲ ပြေးသွားတယ် ။ ၁၀ မိနစ်နေတော့ ပြန်ရောက်လာတယ် ။ လက်ကော ပါးစပ်မှာပါ သွေးတွေနဲ့ ။ ကျန်တဲ့ နှစ်ကောင်က မေးကြည့်တော့ ''ဟိုးမှာရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ့လား ၊ အဲဒီက လူတွေက သွေးစုပ်လာတာ ''
ချက်ချင်းပဲ တတိယ တစ်ယောင်လဲပြေးသွားတယ် ။ ၅ မိနစ်တောင် မကြာဘူး ပြန်ရောက်လာတယ် ။ တစ်ကိုလုံး သွေးတွေနဲ့ ။ အဲဒါနဲ့ ကျန်တဲ့နှစ်ကောင်က စိတ်ဝင်တစား မေးကြတာတာပေါ့ ။
''ဟိုးနားက အုပ်နံရံကိုတွေ့လား ''
တတိယကောင်က ''အေး ၊ ငါမတွေ့လိုက်ဘူး '' တဲ့ ။
« Reply #906 on: February 03, 2013, 10:05:13 AM »
« Reply #907 on: February 03, 2013, 10:05:55 AM »
မောင်ကီးတစ်ယောက် ကျောင်းမှာ သူများလေလည်လို့ smell ရရင်...အမြဲဒေါသတကြီးမေးလေ့ရှိတယ်...
“ဒါဆို....ဘယ်....မအေ.. -ိုး ပေါက်တာတုန်း ကွ” .. တယ့်
မောင်ကီး တောထဲမှာ ချစ်သူနဲ့၂ယောက်ထဲချိန်းတွေ့နေတုန်း.....
ချစ်နွန်းနို့ ကောင်မလေးကို အတင်းဖက်ထားတာ..ကောင်မလေး လေလည်မိသွားပါလေရော...(အသံတော့မကြားလိုက်ရဘူး)...
“ဟင်..ဘာနံ့ကြီးလဲ တိဘူး..ချစ် ပေါက်တာလား”
“ဒါဆို..ဘယ်မအေ.. -ိုး..ပေါက်သွားလဲ မသိဘူး..”
ဗြုန်းကနဲဆို ကောင်မလေး ထရပ်လိုက်တယ်...ပီးတော့ဘာမပြောညာမပြောထပြေးသွားတယ်..မောင်ကီးဆီပြန်မလာတော့တာ ဒီနေ့ထိပါပဲ...ဘာကြောင့်မှန်းလဲ..မောင်ကီးနားမလည်နိုင်ဘူး.. ...စာတိုလေးတစ်စောင်တော့နောက်ဆုံးပေးသွားပါရဲ့...
....ရှင့်လို လူမှုရေး နားမလည်သူတစ်ယောက်ကို ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ လက်မတွဲနိုင်တော့ပါဘူး.....
« Reply #908 on: February 03, 2013, 10:06:43 AM »
၀က်ဝံ, မြေခွေးနှင့် ယုန်တို့ အထွေထွေ စစ်မှုထမ်း ဥပဒေ အရ
စစ်မှုထမ်းချိ်န်ရောက်သဖြင့် စစ်သားစုဆောင်းရေးရုံးသို့ သွားကြသည် ၊
ဆေးကော်မရှင် က ၎င်းတို့တစ်ဦးချင်းကို ဆေးစစ်သည်။
၀က်ဝံ နှင့်မြေခွေးတို့နှစ်ဦးစလုံး ဆေးအောင်ကြသည် ၊နှစ်ဦးစလုံး သုန်သုန် မှုန်မှုန် အမူအရာနှင့် ထိုင်နေကြသည်။
စစ်မှုမထမ်းလိုကြသောကြောင့် ဖြစ်သည် ၊ ဤအချိန်တွင် ၀မ်းသာသောမျက်နှာဖြင့် အခန်းထဲမှ ယုန်ထွက်လာ သည် ။
"ဘာဖြစ်လို့ မအောင်ရမှာလဲ ၊မင်းရဲ့ကျန်းမာရေး ဒေါင်ဒေါင်မြည် ကောင်းတယ်ဆိုတာ ငါတို့သိသားပဲ "
ထိုအခါ ယုန်က ပြောသည်။
"မင်းတို့ . .. ဟို အဝေးကတောင် ကုန်းကိုမြင်သလား"
« Reply #909 on: February 03, 2013, 10:07:26 AM »
ရွာမှာ သိတယ့်အတိုင်း ရေတွင်းတစ်တွင်းမှာ ပဲ ၀ိုင်း ရေချိုးရေခပ်လုပ်လေ့ရှိကြတယ်
လူပျိုကြီး ကိုလူအေးရေချိုးဖို့ လာပါလေရော...
“ကမ္ဘာမကြေ ဘူး ဟေးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ”
.......ဘွတ် ထ်..... !!!
ကံဆိုးချင်တော့ ရေတွင်းနဲ့ကွယ်ပီး အ၀တ်လျှော်နေတယ့် အပျိုကြီး မတင်ညွှန့်တစ်ယောက်ရှိနေတယ်..
သူကလည်း..ရီချင်ပက်ကျိဖြစ်ပီး..အတင်း အံကိုက်ထားပီး..တိတ်တိတ်လေး နေရှာတယ်..ဒါကို လူအေးတစ်ယောက်
ရုတ်တရတ်မို့ အပျိုကြီးမတင်ညွှန့် အလန့်ထညက်နဲ့ ထဖြေတယ်..